လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းထားသော ဆုတံဆိပ်များ ရုပ်သိမ်းနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားကြေညာချက် ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂ဝ၁၈ - Citizen of Burma Award
You are here: Home / Announcement / လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းထားသော ဆုတံဆိပ်များ ရုပ်သိမ်းနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားကြေညာချက် ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂ဝ၁၈
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းထားသော ဆုတံဆိပ်များ ရုပ်သိမ်းနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားကြေညာချက် ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂ဝ၁၈
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းထားသော ဆုတံဆိပ်များ ရုပ်သိမ်းနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားကြေညာချက်
ရက်စွဲ – ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒီမိုကရေစီအရေး ထောက်ခံအားပေးသော မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ၊ အသင်းအဖွဲ့များက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကို လေးစားဂုဏ်ယူဖွယ်ရာဆုများ ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ချီးမြှင့်ခြင်းများမှာ မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံးကိုယ်စား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ခုခံတော်လှန်ခြင်းသင်္ကေတအဖြစ် ဂုဏ်ပြုအပ်နှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ခံယူပါသည်။
ဆိုးရွားသော စစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံး ရာစုနှစ် ထက်ဝက်မျှ ရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ကြရသည့် လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုများ၊ လူသားမျိုးနွယ်စုများအပေါ်ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများအား မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ၊ အသင်း အဖွဲ့များ အနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်မှ ရပ်တည်ကာ ကျူးလွန်သူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် အား တက်ခဲ့ရသည်။ ကျူးလွန်သူများကို အရေးယူရန် နည်းလမ်းအသွယ်သွယ် တို့ဖြင့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းများကိုလည်း နားလည် လက်ခံနိုင် ပါသည်။
ယခုကာလများအတွင်း လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းထားသော ဆုတံဆိပ်များ ရုပ်သိမ်းမှုကို အချို့သောနိုင်ငံများ၊ အသင်းအဖွဲ့များက ပြုလုပ်လာကြသည်ကို ဝမ်းနည်းစွာ ကြားသိရပါသည်။ ဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်မှုများသည် ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် နိုင်ငံများ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အမှန်တကယ် လေးစားခြင်း၊ တန်ဖိုးထားခြင်း၊ ဂုဏ်ယူမြတ်နိုးခြင်းတို့ကြောင့် အပ်နှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျွနု်ပ်တို့ ရိုးသားစွာနားလည်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အချို့သော နိုင်ငံများ၊ အသင်းအဖွဲ့များက ဂုဏ်ပြုဆုများအား တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အသုံးချပြီး၊ ၎င်းတို့ အကျိုးအတွက် နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ခြင်းမျိုးတို့ကို စိုးရိမ် သံသယဖြစ်ဖွယ် မြင်တွေ့လာရပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် ဆုချီးမြှင့်ရာ အသင်းအဖွဲ့များက တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တန်ရာတန်ကြေး ပြန်လည်တောင်းခံသည့် ပုံစံမျိုး၊ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ခြင်းမျိုးတို့ကို အခြေခံသော ဆုချီးမြှင့်ခြင်း၊ ဆုရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ကို ကျွနု်ပ်တို့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းမှ အလေးအနက် ပြစ် တင်ရှုတ်ချပါသည်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆုများပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ စွတ်စွဲပြစ်တင်ခြင်းတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရပ်ရပ် တိုး တက်ဖြစ်ထွန်းလာလိမ့်မည် မဟုတ်ဘဲ၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် နိုင်ငံရေးအခက်အခဲ အကျပ်အတည်းကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဆင်ခြင်သုံးသပ် ချဉ်းကပ် ဖြေ ရှင်းခြင်းဖြင့်သာ အောင်မြင်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အရေးကိစ္စများ၏ ပကတိအခြေအနေမှန်ကို ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တဖက်သတ် အမြင် များဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျိုး အမြတ် မျှော်ကိုးဆောင်ရွက်ခြင်းများက မိမိတို့ပြည်သူလူထုနှင့် ပြည်သူ့အစိုးရအပေါ် ကူညီအားပေးဆောင်ရွက်ရာ မ ရောက်ဘဲ မလိုလားအပ်သော အခြေအနေဆိုးများ ရလဒ်ဆိုးများအား ဖိတ်ခေါ်ရာရောက်နေသည်ဟု မိမိတို့အနေဖြင့် သုံးသပ်ရှုမြင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ၊ အသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဧ။် လတ်တလောရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲနှင့် အကျပ်အတည်းများ အ ပေါ် မှန်မှန်ကန်ကန် ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်စေရန်နှင့် ထိရောက်သော၊ လက်တွေ့ကျသော အားပေးကူညီမှုများဖြင့် ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ကျွနု်ပ် တို့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် အသင်း ၏ သဘောထားကြေညာချက်အား လေးနက်စွာ ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ။
The announcement of the Citizen of Burma Award Organization on revoking awards to
Announcement No. 6/2018
Many nations around the world who have been friendly with Myanmar have bestowed prestigious awards upon Daw Aung San Suu Kyi, supporting her courage and effort to peacefully move Myanmar toward democracy over the decades.
Under the military dictatorship’s brutal rule for halfacentury, the people of Myanmar faced unbounded human rights violations, war crimes and crimes against humanity. We have always accepted and appreciated the support given by other countries and organizations to relieve this plight.
We have learned with great sadness of the recent revocations of honors given to Daw Aung San Suu Kyi. We understand that these honors were given with respect for the integrity Daw Aung San Suu Kyi has always lived with. These revocations have made clear that in many cases, countries and organizations that had presented honors to Daw Aung San Suu Kyi had done so with their own political benefit asamotive.
Therefore, as the Citizen of Burma Award Organization, we condemn those organizations that have revoked awards given to Daw Aung San Suu Kyi for prioritizing political benefit over moral responsibility.
The blame placed upon Daw Aung San Suu Kyi and the revocation of her awards and honors do nothing for the improvement of the condition of Myanmar. Conversely, they serve to exacerbate existing tensions in the region, and promote ignorance over discourse.
There are many facets to the situation in Myanmar, of whichaselect few have been amplified negatively around the world, regardless of consequence. This narrow-mindedness without consideration for context can prove harmful to the progress Myanmar and its people have made to shed the ignorance imposed by the military dictatorship.
We, Citizen of Burma Award Organization, strongly urge you as nations friendly to Myanmar to continue to analyze both the current and historical situation of our country, and take appropriate action in support of the welfare of all who are affected.
November 4, 2018February 2, 20200
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂ဝ၁၉)The announcement of the Citizen of Burma Award Organization on revoking awards to Daw Aung San Suu Kyi Announcement No. 6/2018